Manazava ny filankevitry ny mpanatanteraka UNWTO: Taratasy vaovao avy any Chile
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Manazava ny filankevitry ny mpanatanteraka UNWTO: Taratasy vaovao avy any Chile
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Chili • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • malaza ankehitriny
Namaky 12 aho
Araka ny efa nampoizina ary tamin'ny anaran'ireo mpikambana 32 ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka, ny filohan'ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO, José Luis Uriarte Campos avy any Chile dia nanamafy tamin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ny tolo-kevitry ny filankevitra mpanatanteraka izay nivory tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity mba hifidy indray. Atoa Zurab Pololikashvili ho Sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany nandritra ny vanim-potoana 2022-2025.
Mpisolovava ny minisitry ny fizahantany avy any Chile. Amin’ny maha filohan’ny filankevi-pitantanan’ny UNWTO amin’izao fotoana izao dia nandray fepetra lehibe izy omaly. Nohazavainy mazava fa niasa tao anatin'ny Fitsipika UNWTO ny Filankevitra Mpanatanteraka tamin'ny fifidianana an'i Zurab Pololikasgvili tamin'ny Janoary. Afaka mamaky eo anelanelan'ny andalana ny mpisolovava.
Nohazavain'Atoa Campos araka ny tokony ho izy ny fizotry ny filankevitry ny mpanatanteraka nivory sy nitohy araka ny fitsipiky ny UNWTO, izay mazava ho azy fa tsy nisy nanontany.
Raha ny marina, tsy fahadisoan'ny Filankevitry ny mpanatanteraka ny UNWTO, raha tsy afaka nanamafy ny fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo ny fivoriamben'ny UNWTO, indrindra rehefa niova ny toe-draharaha, ary tsy fantatry ny Filankevitra mpanatanteraka ny fiovana eo anelanelan'ny andro fanapahan-kevitra. natao ary Fivoriambe.
Azo heverina fa ny antony hisian'ny volana maromaro eo anelanelan'ny fanapahan-kevitra sy ny fanamafisana dia ny hamelana ny fanovana hodinihina.
Anjaran'ny Fivoriamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO) ho avy izao ao Madrid ny hanamafy na tsia ny tolo-kevitry ny filankevi-pitantanana manomboka ny volana janoary amin'ity taona ity.
Raha mijery ny UNWTO, rehefa mijery ny sekretera jeneraly Pololikashvili, ary rehefa mijery ny fomba fihevitr'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra Mpanatanteraka amin'izao fotoana izao, dia mahatsapa fa mety ho any amin'ny planeta hafa isika, raha oharina amin'ny toerana nisy antsika tamin'ny Janoary, na talohan'ny Septambra.
Ireo mpikambana 33 ao amin’ny filankevitra mpanatanteraka dia ny 1. Arabia Saodita – 2. Alzeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brezila- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. Sina – 9. Congo – 10. Côte d’Ivoire – 11. Egypt – 12. Espaina – 13. Federasiona Rosiana – 14. France – 15. Gresy – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Repoblika Islamika Iran- 20. Italia – 21. Japon – 22. Kenya- 23. Litoania- 24 Namibia – 25. Pero – 26. Portugal – 27. Repoblikan’i Korea – 28. Romania- 29. Sénégal – 30. Seychelles – 31. Tailandy – 32. Tonizia – 33. Torkia – niasa tamin’ny finoana tsara ary teo ambanin’ny fitsipika henjana napetraka. rehefa mifidy ny volana janoary.
Araka ny fitsipika ankehitriny, ilaina ny fanamafisana io soso-kevitra io miaraka amin'ny 2/3 ny ankamaroan'ny fivoriambe ho avy.
Ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili dia nametraka ny Filankevitra Mpanatanteraka teo an-toerana, nametraka fe-potoana fohy kokoa ho an'ny fivoriana fifidianana. Tapaka izany tamin’ny fivorian’ny Filankevitra Mpanatanteraka tao amin’ny tanindrazan’ny Sekretera jeneralin’i Georgia tamin’ny taon-dasa. Nampiakatra volomaso indray izany tamin’io fotoana io.
Ny Minisitry ny Chile dia tsy nitarika ny faha-112. Filankevitra mpanatanteraka rehefa noraisina tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa tany Georgia io fanapahan-kevitra io.
Ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka matetika dia tsy atao any amin'ny firenena niavian'ny sekretera jeneraly.
Tamin'izany fotoana izany ny Hon. Najib Balala avy any Kenya no nitantana. Tsy takona afenina ny fiheverana an’i Balala amin’izao fotoana izao fa manohana ny sekretera jeneraly amin’ny fanamafisana azy amin’ny herinandro ambony.
Noho io hetsika io, kandidà iray ihany avy any Bahrain no nahavita niditra tao amin'ny hazakazaka ary saika tsy nisy fahafahana hanao fampielezan-kevitra nandritra ny fanakatonana manerantany Coronavirus. Tsy nanana fahafahana tena izy mihitsy izy, ary kandidà 6 hafa no tsy afaka namokatra taratasy haingana tao anatin'ny fe-potoana fohy, ary nandritra ny fihanaky ny COVID-19 mba hiditra amin'ny hazakazaka. Anisan'izany ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny WTN sy ny tale jeneralin'ny filankevi-pitantanan'i Nepal teo aloha Deepak Joshi.
Raha nisy taolam-paty teo amin'ny sekretera jeneralin'ny sekretera jeneraly dia nangataka ny hanitarana ny zotram-pifidianana mihoatra ny volana Mey izy. Manoloana izany dia nanosika ny hisian’ny fe-potoana fohy kokoa ny filankevitry ny mpanatanteraka hivory sy hifidy azy. Tsy maintsy resy lahatra izy fa tsy hiatrika fifaninanana henjana tamin'ny Janoary – ary tsy nanao izany.
Raha vao nesorina ny antony voalohany nanetsika ny fifidianana tamin'ny volana Mey ka hatramin'ny Janoary, dia ny seho ara-barotra FITUR, dia mbola tsy noraharahain'ny Sekretera jeneraly ny fangatahana na dia efa nisy taratasy misokatra voarain'ny sekretera jeneraly roa teo aloha aza, avy amin'ireo mpitarika izay nahitana anarana toa an'i Carlos Voegeler, Profesora Geoffrey Lipman, Louis D'Amore sy ny hafa. Ny taratasy dia nanentana ny Sekretera jeneraly handroso ny fivorian'ny Filankevitra mpanatanteraka amin'ny daty voalohany na mihoatra lavitra.
Fantatry ny Sekretera jeneraly tsara fa ny famelana fotoana fanampiny dia nanokatra ny fitenenana ho an'ny fifaninanana. Fa kosa, nampiasa ny ezaka rehetra nataony izy nitarika ny fivorian'ny filankevitry ny mpanatanteraka tamin'ny volana Janoary mba hikarakarana saika ho an'ireo firenena filankevitra mpanatanteraka, namela firenena mpikambana UNWTO hafa sy ny krizy corona, mila fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, indrindra ny WTTC amin'ny sisiny.
Raha nampiantrano ny sakafo hariva tao Madrid ny praiminisitra Zeorzia ny alina talohan'ny fifidianana, nijanona tsy teo ho fanoherana ilay kandidà Bahrain.
Mazava ho azy fa nanodinkodina ny dingana ara-drariny ity hetsika ity, saingy mety ho ao anatin'ny fepetra sy politika izany rehetra izany. Mazava ho azy fa napetraka ny fitsipika sy ny politika toy izany rehefa tsy nahafantatra momba ny Coronavirus izao tontolo izao.
Araka ny fanazavan’ny Honoré. Ny sekretera jeneraly Francesco Frangialli tamin’ny hdia taratasy misokatra navoaka tamin'ity herinandro ity, tsy ampy ny ara-dalàna.
Amin'ny fanodinkodinana ny dingana, dia mety ho ara-dalàna sy maloto fitondran-tena ianao.
Ny zotram-pifidianana dia mety hifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny lalàm-panorenana, saingy miaraka amin'izay koa tsy rariny sy tsy mitovy. Amin'ny faran'ny andro dia tsy etika ny fomba fiasa.
Hoy i Sophocles: “misy teboka any ambadika izay na dia ny rariny aza dia lasa tsy rariny".
Ny taratasy misokatra faharoa natolotry ny sekretera teo aloha - ireo jeneraly momba ny fitadiavana ny vaomiera etika, ary ny fikarohana mihitsy no tokony ho antony hilazan'ny mpikambana tsy miangatra hoe "andraso kely"
Betsaka ny zava-misy tsy fantatry ny Filankevitra mpanatanteraka tamin'ny nifidy an'i Zurab Pololikashvili
Ny zava-misy fa ny fanakianana sy fanakianana ataon'ny manamboninahitra etika ao amin'ny tatitra nataony tany amin'ny Fihaonambe, ary maro ireo tompon'andraikitra ambony teo aloha ao amin'ny UNWTO no nandray an-tanana ary nanoratra taratasy misokatra natao ho an'ireo firenena mpikambana dia mampiseho mazava fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny UNWTO.
Ny fanodinkodinana, ny fanararaotana mpiasa, ny hoe tsy azo atao ny manakiana ao amin'ny UNWTO dia nipoitra taorian'ny tatitry ny Vaomieran'ny Etika.
Tsy fantatry ny Filankevitra Mpanatanteraka ity tatitra ity rehefa nifidy an'i Zurab:
Ity andalana ao amin'ny tatitra momba ny etika ity dia mamintina izany:
Miaraka amin'ny asa fanompoana maherin'ny 35 taona eo ambanin'ny sekretera jeneraly enina ao amin'ny Fikambanana, izay mihoatra ny 20 taona no natokana ho an'ny etika sy ny andraikitra ara-tsosialy, ny tompon'andraikitra ao amin'ny Etika anatiny no tompon'andraikitra amin'ny serivisy maharitra indrindra any Etazonia. ny fikambanana.
Noho izany indrindra dia afaka nanamarika tamin’ny fanahiana sy alahelo nitombo aho fa tapaka tampoka ny fomba fanao anatiny mangarahara efa nisy tamin’ny fitondrana teo aloha, anisan’izany ny fisondrotana, ny fanasokajiana ny toerana ary ny fanendrena, ka mamela toerana malalaka ho an’ny rehetra. opacity ary ho an'ny fitantanana tsy misy dikany.
Ny zava-misy fa maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra mpanatanteraka iray ihany izao no manohana ny taratasin'ireo sekretera jeneraly roa teo aloha an-karihary sy ao ambadiky ny sehatra dia tokony hanome antony ampy ho an'ny firenena tsirairay hanaja ny valin'ny vaomiera momba ny etika hilazana hoe:
… ary avelao hijery fanindroany sy hamantatra ny fiovana lehibe nitranga teo anelanelan'ny fotoana nanamafisan'ny Filankevitra Mpanatanteraka an'i Zurab tamin'ny Janoary, sy ny toe-draharaha atrehan'ny UNWTO androany.
Araka ny nambaran'i Francesco Frangialli, ny fanantenany dia ny hoe ny Fihaonambe, amin'ny maha-"orga fara tampony" an'ny UNWTO, dia hanao izay ilaina mba hiantohana ny fifidianana ara-drariny any Madrid sy ny fiverenana amin'ny fitantanana tsara ny Fikambanana.
Ny taratasy nalefan'ny Lehiben'ny Filankevitra Mpanatanteraka UNWTO tamin'ny Janoary 24 tamin'ny 2021 Novambra dia nilaza hoe:
Ry firenena mpikambana malala,
Ny zotram-pifidianana teo amin'ireo kandidà natolotry ny Governemanta ao Bahrain sy Georgia, natao nandritra ny fivoriana faha-113 an'ny Filankevitra Mpanatanteraka, dia nanaraka ny lafin-javatra rehetra tamin'ny Lalàna, miaraka amin'ny fomba napetraky ny Filankevitra mpanatanteraka ao amin'ny antontan-taratasy CE/112/6 rev .1, ary koa miaraka amin'ny Lalàn'ny Filan-kevi-pitantanana sy ny Fitsipika Ankapobe momba ny Fifidianana amin'ny alalan'ny Latsabato Miafina an'ny UNWTO.
Tamin’io Fifidianana io, izay notontosaina tamin’ny latsa-bato miafina nataon’ireo Mpikambana ao amin’ny Filankevitra mpanatanteraka nahazo fankatoavana ara-dalàna tamin’ny alalan’ny fanolorana ny taratasy fanamarinana manan-kery navoakan’ny Governemanta misy azy avy, dia natrehin’ny 33 amin’ireo mpikambana 34 ao amin’ny Filankevitra mpanatanteraka nanatrika ny fivoriana, efa voatanisa etsy ambony.
Farany, nandritra ny fivoriana faha-113 an'ny Filankevitra Mpanatanteraka, nanapa-kevitra ny vatana fa hanolotra an'Andriamatoa Zurab Pololikashvili ho Sekretera jeneralin'ny Fikambanana mandritra ny 1 Janoary 2022 ka hatramin'ny 31 Desambra 2025, mifototra amin'io tolo-kevitra io ny vokatry ny tsiambaratelo. latsa-bato teo amin-dRamatoa Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Kandidàn'ny Fanjakan'i Bahrain, nahazo vato 8, sy Atoa Zurab Pololikashvili, Kandidàn'ny Fanjakan'i Georgia, nahazo vato 25.
Ho an'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo sy amin'ny maha-filohan'ny Filankevitra mpanatanteraka ahy, dia manamafy aho fa nandritra ity fiadidiana ity dia efa nampifanarahana tamin'ny sata sy ny lalàna ankehitriny ny hetsika rehetra natao, satria ny fifidianana nataon'ny Filankevitra mpanatanteraka tamin'ny fivoriana teo aloha dia dingana iray. mifamatotra amin'ny fitsipika.
Manoloana ireo voalaza etsy ambony ireo, ary manaja ny vokatry ny latsa-bato natao tamin’ny fivoriana faha-113 an’ny Filankevitra mpanatanteraka, dia averiko indray fa ny Filankevitra mpanatanteraka ao amin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-22 amin’ny sata sy ny andininy faha-29 amin’ny ny Fitsipika momba ny Filan-kevi-pitantanana, dia manoro hevitra amin'ny Fihaonambe Atoa Zurab Pololikashvili ho Sekretera jeneraly mandritra ny vanim-potoana 2022-2025.
Raha tsy misy zavatra manokana hafa, dia mitantara ny fiheverana sy ny fanajako ambony indrindra aho.
Filohan'ny UNWTO Executive Council,
José Luis Uriarte Campos dia mpisolovava ao amin'ny Universidad de Los Andes ary mari-pahaizana maîtrise amin'ny politikam-bahoaka ao amin'ny Universidad del Desarrollo.
Manana traikefa efa ho 20 taona izy, manana asa eken’ny besinimaro, ka nanasongadina ny asany amin’ny maha lehiben’ny mpanolotsaina azy eo anivon’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny Fampandrosoana ary ny Fizahantany; lehiben’ny faritra ao amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny tale nasionalin’ny Sercotec.
Tamin'ny taona 2014 izy no Sekretera jeneralin'ny Antenimieram-pirenena momba ny varotra, ny serivisy ary ny fizahantany, namaritra paikady vaovao momba ny asa sy fanohanana ny sehatra.
Ankehitriny izy dia miasa amin'ny maha-lefitry ny fizahantany, sampana miankina amin'ny ministeran'ny toekarena, fampandrosoana ary fizahantany.
Marihina fa araka ny loharanom-baovao azo antoka eTN dia nosoratan'i Alicia Gomez, mpanolotsaina ara-dalàna ho an'ny UNWTO, ity taratasy ity, ary nomena ny minisitra ao Shily mba hanao sonia.
Tokony handray andraikitra sy hanombana ny zava-misy rehetra ireo solontena UNWTO. Raha tsy izany dia tsy maintsy hiaina 4 taona ny tontolon’ny fizahantany miaraka amin’ny vokany.